सबै गुरुहरुप्रति हाम्रो नमन्-सम्पादकीय - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	सबै गुरुहरुप्रति हाम्रो नमन्-सम्पादकीय
by Tanahu Awaj 17th July 2019
17th July 2019 171 views
हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन संसार भरका हिन्दु र वौद्ध धर्माबलम्बीहरुले गुरु पूर्णिमा मनाए । अर्थात आफुलाई मन्त्र र शिक्षा दान गर्न गुरुहरुलाई सम्झे, श्रद्धा प्रकट गरे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरका पानाहरु आफ्ना गुरुहरु प्रति सम्मान प्रकट गरिएका शब्दहरुले सजिए । महिर्षी व्यासको अवतरण दिवसको रुपमा पनि यो पूर्णिमालाई विषेश महत्वका साथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरु लिने गर्दछन् । बौद्ध धर्माबलम्बीहरु भगवान गौतमबुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक प्राप्त ज्ञान बाँडेको दिनको रुपमा यो दिनलाई महत्वका साथ लिने गर्दछन् ।
गुरु त्यो हो जसले हामीमा सहि र गलत छुट्याउने क्षमताको विकास गरिदिन्छ । हामीमा रहेको अज्ञानता, अहंकार, इष्र्या, लोभ,मोह आदि सबैलाई हटाउन सघाएर एउटा असल मानव बन्ने मार्गतर्फ अग्रसर गराइदिन्छ । त्यसैले मानव मात्र हाम्रो गुरु हुनसक्छ भन्ने होइन् । गैरमानव पनि हाम्रा गुरु हुन सक्छन् । हाम्रा पुर्खाहरुले कहाँ मानव गुरु पाएका थिए र ? उनीहरुले त प्रकृतिबाट सिकेका हुन् । सहनशिल हुन पृथ्वीबाट सिकेका हुन्, परिश्रमी बन्न मौरी र कमिलाबाट सिकेका हुन्, आफ्नो काम निर्धारित समयमा गर्न सूर्यबाट सिकेका हुन् । घाम, पानी र हावा हुरी नभनि निरन्तर हामीलाई सितल छहारी प्रदान गर्ने पीपलले हामीलाई निश्वार्थ भावले अरुको सेवा गर्न सिकाएको हो ।
मानव गुरु प्रति भक्ति र श्रद्धा प्रकट गर्न हिन्दु वा बौद्धहुने भन्ने होइन् । सबै धर्मका अनुयायीहरु आफ्ना गुरुहरु जसले जिन्दगिका अनेकौ मोडहरुमा गलत मोड लिनबाट जोगाए, उनीहरुका प्रति सम्मान प्रकट गर्दछन् । केवल दिनमात्र फरक हो । हाम्रा अधिकांश समस्या र द्विविधाहरुको निराकरण गरिदिने अनि अज्ञानता र अचेतनाको अँध्यारोबाट ज्ञान र सचेतनाको उज्यालो तर्फ हामीलाई अग्रसर गराउने र सहि मार्ग प्रर्दशन गर्ने सम्पूर्ण मानव र गैरमानव गुरु प्रति हाम्रो पनि नमन् ।
हरियो साउन र जीवनको हरियाली
प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी अस्तित्व
वातावरण संरक्षणः कानून, हामी र हाम्रो दाइत्व
असहिष्णु बन्दै सत्ताधारीहरु र सिङ्गो सरकारी संयन्त्र
एउटा बुद्ध चाहिएको छ
सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानून र व्यवहार
शिक्षकको प्रतिष्ठा अझ गिराउने कि जोगाउने ?
सम्पदा संरक्षण सबैको जिम्मेबारी
लोकतन्त्र र समृद्धिको अभियानमा समृद्धिका लागि मातृभाषा बचाउँ
केही मिठा बात गरौं !
दशैं कस्को ?
नबदलिएको अनुसन्धान कार्यशैली